Forskolin ခန္ဓာကိုယ်ပေါက်ကွဲမှုသင်၏အခမဲ့အစမ်း Bottle သဆိုကြသည် - ကြံ့ခိုင်ရေးပြန်အမ်း
Home » ဖြည့်စွက်မှုများ » Forskolin ခန္ဓာကိုယ်ပေါက်ကွဲမှုသင်၏အခမဲ့အစမ်း Bottle သဆိုကြသည်
ဒီနွေရာသီအလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့ရှာဖွေနေပါသလား ဒါကြောင့်ပါလျှင်ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့ကြီးသောသတင်းရှိသည်! သာကန့်သတ်အချိန်, သင် Forskolin ခန္ဓာကိုယ်ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုရုံးတင်စစ်ဆေးပုလင်းရရှိနိုင်သည်။
အဆိုပါဖောင်းပွ Forskolin နှင့် ပတ်သက်. ဘာအံ့သြ? ဤတွင်သောအရာကို forskolin အပေါ်အသေးစိတ်အချို့သည်င်:
အဆိုပါအင်အားကြီးဝင်း, forskolin, အပူစီနံမိသားစုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပျိုးပင်ဖြစ်သည့် coleus forskohlii စက်ရုံ၏အမြစ်များမှာတွေ့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ သုတေသီများကြောင်းမကြာသေးမီကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြ စင်ကြယ်သော forskolin ထုတ်ယူ ခေါင်းမာခန္ဓာကိုယ်အဆီအဖြစ်တိုးပိန်ကြွက်သားထုထည်ဖြိုဖျက်ကူညီပေးပါမည်။ ဤသည်ဖြည့်စွက်ယောက်ျားအဖြစ်မိန်းမတို့အဘို့အကြီးအအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
သာယာယီရလဒ်များကိုပူဇော်သောအခြားအစားအသောက်ဖြည့်စွက်မတူဘဲ, Forskolin ကိုယ်အလေးချိန်ဆီသို့ဦးတည်နေတဲ့ Multi-pronged ချဉ်းကပ်မှုရှိပါတယ်။ ဒါဟာခေါင်းမာအဆီအိတ်ကပ်ကိုမီးရှို့ဒါပေမယ့်လည်းအနာဂတ်အဆီပေါင်းစပ်တားစီးဖို့မသာဆယ်လူလာ level မှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်ကိုယ်အလေးချိန်ဒါပေမယ့်လည်းအပြီးတိုင်ကြောင့်ပယ်မထားမှသာကူညီပေးသည်!